Showing posts sorted by relevance for query အင်္ဂလိပ်ဘာသာ လေ့လာစရာ. Sort by date Show all posts
1/12/2014 01:25:00 PM learn-english
အားပေးဖတ်ရှုပြီး ရှယ်ကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ ၀ါသနာရှင်များကို အထူးကျေးဇူး တင်လိုက်တာဗျာ။စေတနာသက်သက်ရေးတာဆိုပေမယ့် ဖတ်တဲ့သူ၊ ရှယ်တဲ့ သူတွေကိုမြင်တွေ့ချင်တာ ကျွန်တော်ဆန္ဒပါ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ လေ့လာစရာပေ့ခ်ျဟာ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပတ်သက်ရင်ထိပ်တန်း ကနေ ဦးဆောင်နေတဲ့ ပေ့ခ်ျဖြစ်တာမို့ ဒီပေ့ခ်ျမှာ ရေးခွင့်ရတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူမိ ပါတယ်။
မနေ့က...of နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀ါကျလေးတွေကို (၃၀၀ကျော်ရှယ်တာတွေ့ တော့ ရင်ထဲ အရမ်းကြည်နူးမိတယ်။အားလုံး အင်္ဂလိပ်စာတော်ကြပါစေ..
အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မိမိဘ၀၊ မိမိနိုင်ငံကို မြှင့်တင်နိုင်ပါစေလို့..ဆုတောင်းနေခဲ့မိ ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာအုပ် မထုတ်ပဲ ကိုကိုထွန်း (ပုသ်ိမ်)ကို လူ(၅၀၀)ယောက်သိပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောတာလေးနဲ့တင် ပီတိဖြစ်နေရပါတယ်။
ဖတ်ရှုသူတွေ တစ်စုံတရာ အသိတိုးတာနဲ့ကို ၀မ်းသာနေရပါတယ်။
မနေ့က Inverted sentence (၃)မျိုးကို ဖော်ပြခဲ့တယ်နော်။ဒီနေ့... ၀ါကျအစ မှာ ဘာနဲ့ စသလဲဆိုတာနဲ့ Inversion ဆက်စပ်မှုအကြောင်း တင်ပြချင်ပါတယ်။
(၄) V -ing နှင့် စသော ၀ါကျ
၀ါကျတစ်ခုဟာ V-ing နဲ့ စရင် Inversion နဲ့ရေးနိုင်ပါတယ်။ကဲ.ဘယ်လိုရေး လဲ ကြည့်ရအောင်။
Burning out of control was the forest located in Myanmar.
မထိမ်းနိုင် မသိမ်းနိုင် မီးလောင်ကျွမ်းနေသည်မှာ မြန်မာပြည်မှ သစ်တော များပင် ဖြစ်၏။
ဒီဝါကျက ပုံမှန်ဆိုရင် The forest located in Myanmar was burning out of control.ပါ။ဒါပေမယ့် was ကရှေ့ရောက်နေတော့ Inversion ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီလို V-ing က Complement နေရာမှာရှိရင်( Verb-be နောက်မှာရှိရင်) ရှေ့ထုတ်ပြီး Inversion လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက Complement V-ing ကို ရှေ့ဆုံးမှာထားရင် Inversion နဲ့ပဲ မဖြစ်မနေ ရေးရပါမယ်။
Coming in last in the race was Toe Toe.
ပြိုင်ပွဲမှာ နောက်ဆုံးဝင်လာတာက တိုးတိုးပေါ့။
(အမှန်က Toe Toe was coming in last in the race.)
Not helping the family was Ko Ko Tun.
ကိုကိုထွန်း မိသားစုကို အကူညီမပေးဘူး။
( အမှန်က..Ko Ko Tun was not helping the family.)
Running along the street were my pupils.
(အမှန်က...My pupils were running along the street,)
ကတ္တားနေရာက Ving ကို INVERSION နဲ့ ဖော်ပြနည်း
Complement နေရာက Ving ကိုသာ Inversion လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ကတ္တားနေရာက V-ing ကိုလည်း Inverse လုပ်နိုင်ပါတယ်။
It was/It is ကို ရှေ့ကထားရေးရတာပါ။ကဲ....နမူနာကြည့်ကြစို့။
Crossing bridges in Paris was always pleasant.
ပယ်ရီနိုင်ငံက တံတားတွေကို ဖြတ်ကျော်ရတာ ပျော်စရာပါ့။
ဒီဝါကျမှာ Ving က Complement မဟုတ်ပဲ ကတ္တားဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမယ့် Inversion နဲ့ရေးလို့ရပါတယ်။
It was always pleasant crossing bridges in Paris.
ကဲဒီဝါကျမှာ crossing bridges in Paris ဆိုတဲ့ ကတ္တားကနောက်၊ was ဆိုတဲ့ ကြိယာကရှေ့ဆိုတော့ Inversion ပေါ့။
(၅) "so", "neither" "nor" နှင့်စသော ၀ါကျ။
သဘောတူညီမှုကိုပြတဲ့ "so", "neither" "nor" နဲ့ စတဲ့ စကားပြောဝါကျတို တွေမှာလည်း Inversion နဲ့ မဖြစ်မနေ ရေးရပါမယ်။
(1) She likes coffee. – So do I.
(2) They don't like coffee. – Neither do I.
သူတို့ ကော်ဖီမကြိုက်ဖူး။ ငါလည်း မကြိုက်ပါဘူး။
(3) She won't wait for them. – Neither will I.
သူမက သူတို့ကိုစောင့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါလည်း..ဘယ်တော့မှ စောင့်မှာမဟုတ်ဘူး။
(4) "I am fond of dancing." "So am I.
ငါက ကတာကို ကြိုက်တယ်။ ငါလည်း ကြိုက်တယ်ကွ။
စကားပြော ၀ါကျတိုမှ မဟုတ်ပါဘူး။အောက်က ompound sentences တွေ မှာလည်း Inversion သုံးရပါတယ်။
(1) I like coffee, and so does Nilar.
ကျွန်တော် ကော်ဖီကြိုက်သလို နီလာလည်းကြိုက်၏။
(2) They don't mind the higher prices, and neither do we. (Or: ...nor do we.)
ဈေးပိုပေးရတာ သူတို့ မမှုသလို ကျွန်တော်တို့လည်း ဂရုမစိုက်ပါ။
(3) She will wait for them, and so will I.
သူမက သူတုိ့ကို စောင့်နေမှာဖြစ်သလို ကျွန်တော်လည်း စောင့်နေပါမည်။
(4) She won't wait for them, and neither will I.
သူမက သူတို့ကိုစောင့်မှာမဟုတ်သလို ငါလည်း..ဘယ်တော့မှ စောင့်မှာ မဟုတ်။
ကံ..ဒီလောက်ဆို..."so", "neither" "nor" နှင့်စတဲ့ဝါကျလေးတွေကို Inversion နဲ့ ရေးတတ်ပြီပေါ့။
(၆) Here နဲ့စတဲ့ဝါကျ
အချို့ဝါကျတွေက here is, here are, here comes, here come နဲ့စတတ်တယ်။
ဒါဆို Inversion နဲ့ မဖြစ်မနေ ရေးရပါမယ်။ဒီပုံစံကို စကားပြောမှာ အများဆုံး သုံးပါတယ်။
(1) Here are the books that I don’t need anymore.
ဒါက ငါမလိုတော့တဲ့ စာအုပ်တွေပဲ။
(2) Here comes the bus!
(3) Here is the book you asked for.
(4) Here comes the sun.
(5) Here comes my mom.
တစ်ချက်မှတ်ဖို့က here နောက်မှာ နာမ်စားလိုက်ရင်တော့ Inversion လုပ်မရပါဘူး။ဥပမာ...
ကဲဒီလောက်ဆို ...Inversionနဲ့ရေးတဲ့ နောက်ဝါကျသုံးမျိုး သိသွားပြီပေါ့။အိမ်မှာ..ကိုယ့်ဖာသာ ၀ါကျတွေ ရေးပြီး လေ့ကျင့်ကြပါနော်...။
3/23/2014 05:48:00 PM articles
1/10/2014 09:41:00 AM learn-english
ဒီနေ့လည်း အသုံးတည့်နိုင်လောက်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားအတိုလေးတွေကို ထပ်မံဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(1) You'll do fine!
(2) Just be yourself!
(3) Eat your fill!
(Have your fill! လည်းရတယ်)
(4) Just in case.
(5) Can you imagine?
(6) Got any idea?
(8) Out with it!
(9) You scared me!
(10) Keep quite still!
(11) Anything you say!
(12) Anyone I know?
(13) Got to fly!
(14) See you off!
(15) Be seeing you!
တစ်ချိန်ချိန်မှာ ..ဆုံကြတာပေါ့။ ။